Kedu ebe saịtị PR dị elu nwere ike inyere gị aka ịzụlite backlinks?
Ọ bụ ezie na mgbanwe algorithm na-agbanwe mgbe niile, backlinks na-adị ezigbo mkpa maka ọkwa ebe nrụọrụ weebụ. Ọ ka dị mkpa iji mepụta backlinks na saịtị PR dị elu iji bulie ebe nrụọrụ gị ma wusie ike gị na weebụ. Ugbu a, Google ranking algorithm na-eje ozi dị nnọọ mfe - nke ka elu ọnụ ọgụgụ ndị dị mma backlinks na-atụ aka na saịtị gị, ihe dị mkpa ka ibe weebụ gị bụ.
Otú ọ dị, ị chọrọ backlinks ọ bụghị naanị iji melite njirimara njikwa njikwa gị - new york life long term care insurance. Ha na-enyere aka mee ka mgbasa ozi gị mara ma weta okporo ụzọ ndị ọzọ sitere na ebe ndị dị mkpa.
Iji nwee ezigbo njikọta njikọ, ọ bụghị naanị na ị ga-arụ ọrụ ike ịmepụta njikọ ọhụrụ na-abanye na saịtị gị mana njikọta njikọta ị na-ejikarị iji chọta ma kpochapụ njikọ ndị ahụ nwere ike imebi azụmahịa gị.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi achọ saịtị dị elu maka saịtị maka ịmepụta backlinks dofollow n'ebe ahụ. Ọzọkwa, anyị ga-atụle otu esi emepụta profaịlụ njikọta ma wepu njikọ sitere na ya.
Olee otu esi enweta uru backlinks PR dị elu maka saịtị gị?
Ikwesiri ịmalite site n'ile anya n'oru ndi ahia gi. Ihe niile ị chọrọ na nkwụsị nke njikọ njikọ bụ ịchọta weebụ maka isiokwu ndị ị na-echebara ma hụ ebe nrụọrụ weebụ dị elu.
Iji lelee saịtị ndị dị elu maka onye na-asọ mpi ahịa nke ahịa, ị nwere ike iji Semilite Web Analyzer ma ọ bụ Ngwaọrụ Weebụ yiri nke ahụ. Ozugbo ịchọtala isi ihe nchọgharị weebụ nke na-ezo aka njikọ inbound, ịkwesịrị ịnwale ịmegharị njikọ ndị a ma nweta njem a bara uru na saịtị gị.
Dị ka iwu, ezigbo backlinks sitere na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gosipụtara. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kwalite azụmahịa gị na mgbasa ozi mmadụ ma bulie ọnụ ọgụgụ nke iguzosi ike n'ihe nye ndị ọrụ gị. N'iji otu akụrụngwa pụrụ iche rụọ ọrụ, ị nwere ike ịlele njirimara nke akara gị na mgbasa ozi mmadụ ma dochie okwu ndị a na backlinks.
N'ikwu okwu n'ozuzu, backlinks na-eje ozi dị ka ikike na ebe nrụọrụ weebụ na-egosi. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ịnye ndị ahịa gị ngwaahịa na ọrụ dị mma nakwa yana ọdịnaya bara uru, ndị mmadụ ga-ekwurịta banyere gị ma jikọọ na saịtị gị. N'ihi ya, ị ga-enwetakwa ọtụtụ ihe njikọ na-ejikọta njikọta na ihe ndị dị mma.
Olee otu esi ejikwa aha ụlọ ọrụ gị n'ịntanetị?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị okporo ụzọ mgbe niile ma nyefee ndu, ịkwesịrị ijikwa njirimara ịntanetị gị. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ nyocha na-adịghị mma maka azụmahịa gị na weebụ, tinye oge gị na mgbalị iji dozie nsogbu onye ahịa gị kama ịnwa iwepu nzaghachi a na-adịghị mma. Ikwesiri ịzaghachi na mmejọ na-ezighi ezi ma chọpụta ihe mebiri. Ọ bụrụ na nsogbu dị n'akụkụ gị, ịkwesịrị ịmezi ya ma nye onye ahịa ihe ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ.
Dịka iwu, ndị ahịa na-enweghị afọ ojuju gbanwere uche ha mgbe ha nwesịrị ma gbanwee echiche ha, na-ekerịta ihe ị mere ma na-agbanwe ọnọdụ ọjọọ n'ọnọdụ ka mma.
Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-arụsi ọrụ ike iji mejuo ndị ahịa kama ịme njikọ. Ka ị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị ọrụ gị na-egwu gị, ị ga-enwekwu akwụkwọ nkwado dị elu nke ị nwere ike inweta.